ICJ oo dhageysaneysa doodda Kenya iyo Somalia – Calan Qaran
September 19, 2016	by Shakra Hussein
ICJ oo dhageysaneysa doodda Kenya iyo Somalia
Maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee Hague, ayaa maanta u fariisatay dhageysiga dacwad Somalia u gudbisay oo ku saabsan muranka badda ee u dhexeeya Qaranka Soomaaliyeed ee dowladda Kenya.
Xeer ilaaliyaha qaranka Kenya Githu Muigai, ayaa maxkamadda ka hor sheegay in wafdiga uu hogaaminayo ee dalkiisa matalaya ay maxkamadda ka codsanayaan inay ogolaato in kiiskan ay u deyso labada dal si’ ay wada xaajood ugu dhameeyaan khilaafkooda.
Xeer ilaaliye, Muigai, ayaa soo hadal qaaday in is-afgarad dhex maray labada waddan sanadkii 2009-kii uu dhigayay in muranka badda lagu xalliyo hab diblumaasiyadeed waafaqsan xeerarka caalamiga ah ee Qaramada midoobay.
Muran badeedka Kenya ay ku doodeyso inay wada hadal ku xalliso wuxuu ka badan yahay 100,000 KM sq (boqol kun kiilo mitir iskuweer), laakiin Somalia waxay horey u laashay is-afgaradkii 2009, iyadoo dacwaddan geysay The Hague.
Barta cayiman ee leysku hayo, waxay ka tirsantahay xuduudda Somalia ee jahada Koofur-Bari, laakiin Kenya waxay rabtaan in Line toos ah dhanka bari loogu jeexo xuduud xigeenka dalkeeda.
Sida lagu ogaaday baaris hore, waxaa muran xadeedkan badda ku beegan laba ceel shidaal oo Kenya ay dooneyso inay qaadato, laakiin Somalia ayaa xaq u leh maadaama uu xadkeeda yahay.
Khaladaad hore iyo Cawaaqibka ka dhashay
Soomaali badan ayaa ka careysan saxiixa Dowladdii Kumeel gaarka ee M/weyne Sheekh Shariif, R/wasaare Cumar C/rashiid iyo Wasiirkiisii qorsheynta C/raxmaan C/shakuur oo ogolaaday in wada hadal lagu xalliyo muran badeedka Kenya billowday 2009.
Horey uma jirin wax khilaaf ah ama hadal heyn ah oo arrintan ku saabsan, taasina waxay caro galisay malaayiin muwaadiniin Soomaali ah oo aaminsan in daciifnimada qaranka Soomaaliyeed ay ka faa’iideysaneyso Kenya.
Horey waxaa jiray xadgudubyo la rumeysan yahay in Kenya ay ku heyso Somalia, sida in dhulka NFD ay gumeysi qeybsi ku hanatay, inay ku xad gudubto Soomaalida u qaxday dhulkeeda, iyo inay malaayiin ka faa’iiddo qaadka ay u beec keento Somalia.
Khaladaadkaas oo jira waxaa wehliya in ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM ay si’ joogta ah doqeyn uga geystaan xuduudda iyadoo dhowr jeer oo hore leysay Soomaali aan waxba galabsan oo rayid ah.
Go’aankii xuduudda Somalia iyo Kenya looga dhisay gidaarka/Darbiga ayaa cadowtooyo taariikheed aan marna la illaawi karin ku abuuray Soomaalida maadaama wiil iyo abtigii isku af ah xeendaab lagu kala qariyay.
Abdishakur Hussein Mohamed
Calan Qaran, Muqdisho-Somalia
Wareysi: Keating oo Ka Hadlay Arrimaha Doorashada November 4, 2016